Calaamadaha ugu sarreeya ee ugu sareeya 10da siyaabood ee loogu talagalay shabakadda internetka
Web goynta ama goosashada webka waa habka ay ku jiraan ururinta macluumaadka internetka oo u beddelaya qaabab kala duwan. Asal ahaan, duubista webka waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo qaar oo faafinaya webka bani'aadamka si ay u ururiyaan macluumaadka gaarka ah ee blogyada iyo bogagga. Dhawaan dhowr ah oo farsamooyinka casriga ah ayaa loo sameeyay si ay u simaan daba-gelinta bani-aadamka kaas oo dhacaya marka aynu eegno bogga internetka oo soo uruuriyo xogta la rabo - imagem gratis. Iyadoo la adeegsanayo, waxaan si fudud u samayn karnaa xogta la xidhiidha sirdoonka farsamada, DOM kala qabashada, isdhexgalka dadka-kombiyuutarka, geedi socodka dabiiciga ah iyo aragtida kombiyuutarka.
Automation Meesha meel kasta waa nooc ka mid ah nidaamka nidaamka nidaamka robotka (RPA). Qalabkani wuxuu inta badan isticmaalaa shirkado waaweyn waxaana uu ka caawiyaa iyaga inay soo saaraan xogta internetka iyada oo aan wax dhibaato ah.
UlPath wuxuu fududeynayaa horumarinta websaydhka iyo barnaamijyadeeda inay ka soo qaadaan xogta laga soo qaato bogga la rabo. Tiknoolajiyad gaar ah waxay u oggolaataa dadka isticmaala inay kaydiyaan xogta qaabab cayiman.
Barnaamijkan wuxuu bixiyaa xulashooyin farsamo oo wanaagsan oo ka caawiya hawlaha imtixaanka webka. Faylasha la soo saaray waxay ku yimaadaan qaabab sida CSV, Txt, XLS, iyo kuwo kale.
Fminer waxaa inta badan loo adeegsadaa kuwa aan barnaamijka ahayn oo ka caawiya inay ka soo saaraan xogta laga helo bogagga internetka iyo blogs isku mar.
5..Visual Web Ripper
Barnaamijkan shabakada buuggu waa mid faa'iido leh, sababtoo ah waxay ku dheehan tahay oo kaliya qoraalada, laakiin sawirada iyo fiidiyowga fiidiyowga.
Wuxuu xusuustaa faylasha wuxuuna ururiyaa macluumaadka qaybo kala duwan. Qalabkani wuxuu ka yimaadaa kharashka oo wuxuu ku keydin karaa faylashaada qaabka Txt iyo XLS.
Waa sahlan tahay in la isticmaalo barnaamijka loogu talagalay soo-ururinta xogaha astaamaha ugu muhiimsan ee ay yihiin xawaaraha iyo saxsanaanta.
8. Shabakada fudud ee shabakada
Waa mid ka mid ah qalabyada ugu fiican ee loo adeegsado webka taasoo fududeyneysa inaan qabno mawduucyo kala duwan. Waxay qabanqaabisaa xogta la uruuriyay oo waxay u qaybisaa qaybo kala duwan iyadoo lagu salaynayo shuruudaheenna iyo waxa laga filayo.
Waxaa lagu hormariyaa waxaana bilaabay shirkadda Import.io Corporation. Import.io waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee ugu caansan internetka ee internetka. Waxay ufiican tahay shakhsiyaadka iyo ganacsatada labadaba waxayna u ogolaaneysaa dadka isticmaala bogagga internetka inay galaan API-kooda kaliya.
10. Websaydh La-isticmaalo
Waa qalab faa'iido leh oo bilaash ah oo SEO ah oo ay isticmaalaan freelancers, horumariyayaasha iyo shirkadaha SEO oo dhan adduunka. Waxay ka caawisaa shabakadaha internetka iyo blogs iyada oo aan wax arin ah, iyo sifooyinka ugu muhiimsan ee ah mashiinka search engine, keywords keywords, goosashada wakiilada, sawirada faallooyinka, iyo jeegleys link.